Friday April 17, 2015 - 11:54:10 in Maqaallo by Super Admin
waxaana tusaale kuugu filan isbaaradii ay dhawaan dhigatay Dekeda Berbera ee ay hadana ku fashilantay.Waxaana Mahadaa iska leh Golihii Baarlamaanka oo is-hortaagay in mashruucaa dadka gaarka ah lagu xooleynaayo uu ka hirgalo Xayndaabka dekeda qaranka Somaliland.Waxaa iyana shacabweynaha reer Somaliland ka dheregsanyihiin in ay xukuumadani si baalmarsan Dastuurka qaranka ugu wareejisay dhul aad u balaadhan ( Land Bolcks ) Shirkado daban oo Shidaalka sahamiya iyada oo aan sharciga iyo Baarlamaanka qaranka la soo marin si loo lunsado lacago Malaayiin Dollar ah oo kala ahaa lacagaha xaqul qalinka ah, lacagaha wacyi gelinta dadweynaha iyo lacagaha horumarinta degaanada ay shidaal baadhistu saameysay.
Hadaba iyada oo laga dheregsan yahay lacagtaa badan ee lagu lunsaday shirkadahii shidaalka sahaminaayey ayey maantana xukuumadeenii is-huwan ee ku caan ka aheyd Xaaluf daaqa iyo dhoobo qaadku iyada oo ay u hadhay mudo kooban oo 70 caano maal ah ay midi-roorteyneysaa oo ay wareejinaysaa Dekedii Berbera oo ah halbowlaha ama hooyada dhaqaalaha ee Somaliland maadaama dhaqaalaha dalku 85% uu dekeda ka soo xaroodo. waxaan u soo jeedinayaa Golaha baarlamaanka iyo dhamaan shacabweynaha reer Somaliland in ay is hortaagaan Wareejinta Dekeda oo ay diidmo iyo kacdoon salmi ah ay shucuurtooda ku muujiyaan oo ay dareenkooda iyo damiirkooda cabiraan kana hortagaan oo ka dhiidhiyaan wereeginta Dekeda Berbera ee watigan kala guurka ah. Waxaa la isku raacay in qodobadan hoose ay xakameynayaan Maalgashigan ka gaadhsiiska ah ee midiroorteynta ah.
1- Somaliland ma dhameys tirna oo waa wada qabyo sharcigii iyo xeerarkii seeska u ahaa maalgashiga , wareejinta iyo iibinta hantida maguuranka ee qaranka.
2-Somaliland malaha Caymis ama ( insurance company ) Damaanad qaada hadii khasaare dhaco oo gaadho Shirkadaha Caalamiga ah ee yimaada
3- Somaliland Waa dawlad musuq-maasuq hadheeyey oo aan laheyn Baanan Caalami ah oo aaney Shirkadaha Caalmiga ahi aamini karin.
4- Somaliland malaha maxkamado adag oo madax banaan oo cadaalada ka xaq soori kara ilaa iyo heer Caalami.hadii khilaf soo dhex galo shirkadaha iyo dawlada.
6- Somaliland ma aha dawlad aduunku ictiraafay oo damaanad qaadi karta maalgashiga shirkado baaxad leh oo caalami ah sidaa daraadeed waxay lingax iyo maxlal unoqoneysaa marka wax lakala saxeexanaayo dawlada Federaalka ah ee Somalia.Taas oo Somaliland ka hor imanaysa Gooni isu taageedii oo ka dhigaysa Dawlad Goboleed Somalia ka mid ah.
7- Somaliland Waxaa qabyo ah dhamaan xuuqdii dalkan ay ku lahaan lahaayeen maagashadayaal Ajenebi ah
8- Somaliland dhamaan xeerarkan yar yar ee qabyo qoraalka ah ee aynu hada haysanaa kama diiwaan gashana Maalgashiga Caalamka.
9-Shirkadaha badan ee quud-dareynaaya Dekeda Berbera ee Dilaaliinta tirada beelay ay tuurta ku sitaan weli Codsi gaar ah oo maalgashi ah umay soo gudbin Golaha Baarlamaanka Somaliland.
10- Sida Caadiga ah Caalamka Waa in shirkaduhu codsi maalgashi soo qortaan oo u soo dirtaan Baarlamaanka oo soo gaadgsiiyaan inta aan waxba lakala saxeexan
11- Sharciyada aduunka ee maalgashigu wuxuu qorayaa in Golaha Baarlamaanku ay maalgashadeyaasha siiyaan ” Shahaadad Maalgashi ” oo shisheeye oo Diiwaan gashan kadibna loo ansixiyo shirkadaa in ay wadanka maalgashato.Taasina hada kamay dhicin Somaliland , tusaale ahaan shirkadihii badnaa ee la siiyey Liisanka ay shidaalka dalka kaga baadhayaan waxa hawshoodii loogu dhameeyey suuq-madow oo lama soo marin Golihii Baarlamaanka taas oo burinaysa Dastuurkii dalka u yaalay.
12- Waxaa iyana meesha ka muuqata in aaney isla jaanqaadeyn Gudidii Maalgashiga ee qaranku lahaa ,maadaama ay shirkadaha dhexboodayaan Duul aan xishooneyn oo aan waxba xeerineyn
oo aan xilal ka hayn qaranka laakiin had iyo jeer metela oo ku xagafsada magaca iyo milgaha Xayndaabka madaxtooyada iyo shirkadaha ilma jini boqor ee loo sadqeeyey hantidii Maguuraanka aheyd ee qaranku lahaa.
Waxaa aqoon yahanka iyo wax garadka Somaliland ay isku raaceen in Baahida ugu weyn ee waqtigan kala guurka ah loo wareejinaayo ee loo midi roortaynaayo Dekeda Berbera ay tahay in qaleylka lagu qaybsado lacagaha tirada badan ee gaadhaya ilaa 15 million ee dollar ee xaqul qalinka ah (MOU) iyo lacagta daba socota ee lagu magacaabo lacagta Horumarinta oo iyana loo sii kiish sameystay sidii qaleyl, qadhiidh iyo qudh-qudho joogto ah loogu qaybsan lahaa ee loo lunsan lahaa. shacabka JSL waxaa u damaanad qaadaya Dastuurka dalka u yaala oo qeexaaya in aaney xukuumadu waxba wareejin karin maadaama uu mudo xileedkeedii ay uga hadhay mudo kooban oo 70 maalmood ah. Hadaba ku wareejinta hatida maguuraanka ee ummada sife aan sharciga dalka waafqsaneyn waa xaaraan oo wuu reebayaa dastuurka qaranku.
Shirkada quud-dareyneysa in ay la wareegto Dekeda Berbera ee lagu magacaabo Dubai Port World ( DP ) waa shirkad weyn oo ku caan baxday in ay maalgashato Dekedo badan oo qaaradaha aduunka ku yaala laakiin waxay ku fashilantay Qaar badan oo mandaqada ku yaala sida:
1- Waxay mudo maamuleysay oo ay ku fashilantay Dekeda Baaxada leh ee D-Jabuoti , taas oo ay hada maxkamado uga socdaan cariga ingiriiska ( UK )
2- Waxay ku fashilantay in ay maamusho oo horumar gaadhsiiso Dekeda Sinigaal oo iyana ay maxkabado isla galeen
3- Waxay ku fashilantay oo ay baabiisay oo qalabkiina ka furatay Dekadii caanka aheynd ee Cadan oo hada ku danbeysay gabaahiir kaluumeysatadu isticmaasho
Sidaa daraadeed Shirkadani ( DP ) waxay doneysaa in ay Dekeda berbera baabiiso oo ay shirkadaha kale ee xiisaynaya in ay maalgashadaan ay ka hor joogsato ee maaha shirkad ay ka go’an tahay in ay Dekeda dhisto oo dalka wax ku soo kordhiso waxaana tusaale fiican oo la taaban karo inoogo filan sida ay ugu fishilantay shirkadani ee ay u baabiisay Dekadii D-Jabouti oo ay dhawaan qalabka ka furan doodnto marka maxkamadoodu London ka dhacdo sanadkan dhamaadkiisa. .Danta guud ee shacabka Somaliland Waxay ku jirtaa in Dalka laga Badbaadiyo Xukuumadan Xaaluf Daaqa ah ee Dhoobo qaadka ah ee ay ka go’an tahay in aan waxba loogu iman.
Shacaboow Tiraa Kaa gedmane wax isu gey geyso!
Allow sahal Amuuraha Aakhiro Samaan Ooman baa yimiye!